Toure, Fekir, Higuain, Alisson, Godin, Rabiot, Fabregas & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala iibsiga – Kooxda.com
Toure, Fekir, Higuain, Alisson, Godin, Rabiot, Fabregas & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala iibsiga
Abdiweli Aden Jaamac July 12, 2018 | 1 |
Waxa furmay suuqa kala iibsiga xagaaga waxana ay koox walba haatan suuqa u gali kartaa sidii ay u xoojin lahayd kooxdeeda si ay isugu diyaariyaan xilli ciyaareedka dambe.
Waxa jira kooxo haatanba la soo saxiixday xiddigihii ugu horeeyay sidoo kale wali ugu jira suuqa xiddigo kale si la mid ah waxa jira kooxo wali si fiican ugu jira suuqa raadinayana in ay helaan xiddigo munaasib ah.
Hadaba waxa aan halkan ku soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ay wargaysyada kala duwan ka qoreen.
Kooxda Liverpool ayaa lagu soo waramayaa in ay Roma kala heshiisay saxiixa Goolhayaha Alisson iyada oo miiska u saartay lacag dhan 60 milyan oo euro iyo 5 Gunno ah laakiin Goolhayaha reer Brazil ayaa wali doonaya in uu ku biiro kooxda Real Madrid (Gazetta Dello Sport).
Kooxda West Ham ayaa wadahadalo kula jirta xiddigii hore ee kooxda Man City ee Yaya Toure laakiin waxa la aaminsan yahay in ay ka meer-meerayaan in ay dalab miiska u saaraan 35 jirkan (Sun).
Kooxda Juventus ayaa si Rasmi ah suuqa u dhigtay weeraryahanka reer Argentina ee Gonzalo Higuain oo 30 jir ah kaas oo haatanba lala xiriirinayo kooxda chelsea (Calciomercato).
Chelsea ayaa sidoo kale ugu cad-cad saxiixa xiddiga khadka dhexe ee kooxda Napoli iyo xulka qaranka Italy ee Jorginho oo 26 jir ah (London Evening Standard).
Si kasta ha ahaatee kooxda Man City ayaa wali ku qanacsan in uu Jorginho wali doonayo in uu ku biiro iyaga (Manchester Evening News).
Xiddiga diirada u saaran kooxda Liverpool ee Nabil Fekir oo 24 jir ah ayaa wali doonaya in uu ku biiro kooxda Liverpool isaga oo maamulka kooxdiisa u sheegay in uu jecelyahay in uu kooxdaas ku biiro kadib koobka adduunka (Mirror).
Juventus ayaa doonaysa in ay Cristiano Ronaldo soo raaciso xiddiga daafaca uga ciyaara kooxda Atletico Madrid iyo xulka qaranka Uruguay ee Diego Godin oo 32 jir ah (Tuttosport).
Kooxda difaacanaysa horyaalka Serie A-da ayaa sidoo kale wadahadalo la qaadatay daaafaca kooxda Man United ee Matteo Darmian kaas oo ay doonayaan in ay ku dhamystiraan heshiiskiisa 17 milyan oo euro (Talksport).
Kooxda Barcelona ayaa wadahadalo la furtay kooxda PSG oo ay ka doonayso saxiixa xiddiga khadka dhexe ee Adrien Rabiot oo 23 jir ah kaas oo doonaya in uu isaga tago kooxda (Mundo Deportivo).
Kooxda difaacanaysa horyaalka La Liga ee Barcelona ayaa sidoo kale ku sii dhawaanaysa saxiixa xiddiga daafaca dhexe ee kooxda Sevilla ee Clement Lenglet oo 23 jir ah iyada oo ka bixinaysa 36 milyan oo euro (Goal).
Kooxda Man United oo kali ku noqotay saxiixa xiddiga u ciyaara kooxda Chelsea ee Willian kadib markii ay kooxda Barcelona isaga baxday baacsiga xiddiga (Diario Gol).
Kooxda Chelsea ayaa dhigeeda Napoli u soo bandhigtay xiddiga khadka dhexe ee Cesc Fabregas Kaas oo ay ka qayb dhigayso saxiixyada Maurizio Sarri & Jorginho (La Repubblica).
Tababarihii hore ee kooxda Real Madrid ee Fabio Capello ayaa xaqiijiyay in uu Gonzalo Higuain ku biiri doono kooxda Chelsea kadib markii Juventus dhamaystirtay saxiixa Cristiano Ronaldo (Sky Italia).
One thought on “Toure, Fekir, Higuain, Alisson, Godin, Rabiot, Fabregas & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala iibsiga”
napiil crahmaan July 12, 2018 at 5:38 pm · Edit
waxaan Taagere uahay Liverpool
waan so dhawayanayaa kubiirista Alison ee kooxda sababtoo ah boortayeeri la’aan baa nahaysay